VaMagaya Vanobvisiswa Mari yeChibatiso paMhosva Yavari Kupomerwa
Va Walter Magaya veProphetic Healing and Deliverance Ministries
Mutungamiri weProphetic Healing and Deliverance Ministries, VaWalter Magaya, vamiswa pamberi pedare neChishanu masikati vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvehutano mushure mekuzivisa kwavakaita kuti vainge vawana mushonga unorapa chirwere chegomarara necheshuramatongo.
VaMagaya vamiswa pamberi pedare ramejasitiriti vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvehutano mushure mekuzivisa kwavakaita kuti vainge vawana mushonga unorapa HIV/AIDS wavari kudaidza kuti Aguma.
Mapepa asvitswa kudare anoti VaMagaya vakazivisa kuwana kwavanoti vakaita mushonga uyu usina kunge waongororwa nanamazvikokota munyaya dzezvehutano sezvinodiwa nemutemo.
Muchuchisi we nyaya iyi, VaSebastian Mutizirwa, vaudza dare kuti mapurisa akawana michina yekugadzirisa mishonga pamwe nezvinogadziriswa mushonga uyu kumba kwaVaMagaya paakaenda kunoita tsvakiridzo yezvaitora nzvimbo ikoko mushure mekunge apihwa mvumo nematare yekunosecha kumba kwavo.
Mutongi wedare, Amai Rumbidzai Mugwagwa, vatura mutongo wekuti VaMagaya vabvise mazana matatu emadhora semari yechibatiso uye kuti vasavhiringidzane nevafakazi munyaya iyi.
VaMagaya vanzi vadzoke kudare musi wa26 Mbudzi 2018.
VaMagaya vakashorwa nevanhu vakawanda pamwe nevesangano ravanachiremba vanorwira kodzero dzevanhu avo vakati zvakaitwa naVaMagaya zvaizokonzera kuti vanhu vakawanda varegedze kunwa mapiritsi anozikanwa nezita rekuti maAnti Retroviral Drugs.
Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, vaimbova mukuru weUniversity of Zimbabwe, Muzvinafundo Levi Nyagura, nevamwe vavo vaviri, vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekushandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo mukupa kunonzi kwakaitwa mamwe makambani basa payunivhesiti iyi.
Amai Mugwagwa vati VaNyagura nevamwe vavo vabhadhare madhora mazana mashanu pamunhu ega-ega semari yechibatiso uye vose vasiye magwaro avo ekufambisa kudare vozodzoka kudare musi wa 7 Zvita.
Gweta raVaNyagura nevamwe vavo, VaWilson Manase, vaudza Studio7 kuti mhosva iri kupomerwa vatatu ava haina musoro.
VaNyagura vachiri mumatare neimwe nyaya yekunzi vakashandisa chinzvimbo chavo zvisirizvo kuti vape mudzimai wevaimbova mutungamiri wenyika, Amai Grace Mugabe, gwaro rechikoro kana kuti degree vasina kunge variendera kuchikoro.
Zvichakadai, mutongi wedare arambawo chikumbiro chekuti vatungamiri veZCTU vanomwe vabviswe muhusungwa mushure mekusungwa kwavakaitwa mwedzi wapera pavaironga kuratidzira vachiti vaisafara nemamiriro akaita zvinhu munyika munyaya dzezvehupfumi.
Amai Mugwagwa vati nhengo dzeZCTU idzi, idzo dzinosanganisira mutungamiri wesangano iri, VaPeter Mutasa, nemunyori mukuru musangano iri, VaJaphet Moyo, vanofanira kumira pamberi pedare vachipindura mhosva yavari kupomerwa sezvo vati zvinyorwa zvavakawanikwa vainazvo zvine mashoko akasiyanasiyana, vanofanira kuzvitsanangura kuti zvaiva zvei.